Fianakaviana mitahiry ny fahatsiarovana ilay mpiasa maty nandritra ny didy jadona tao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Fianakaviana mitahiry ny fahatsiarovana ilay mpiasa maty nandritra ny didy jadona tao Brezila
Nizara bokikely i Santo raha notifirin'ny polisy tamin'ny taona 1979
Voadika ny 29 Desambra 2019 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, русский, Português
Maty tamin'ny taona 1979 nandritra ny jadona miaramila ny lehiben'ny sendikà. Sary: Henrique Sales Barros / Agência Mural, nahazoana alalana. A union leader died in 1979 during the military dictatorship. Image: Henrique Sales Barros/Agência Mural, used with permission.
Ity tantara ity dia nosoratan'i Henrique Sales Barros. Navoaka eto izany noho ny fiarahamiasa mifampizara votoaty eo amin'ny Global Voices sy ny Agência Mural.
Tamin'ny 31 Oktobra 1979, 13 taona i Santo Dias Filho – na Santinho, araka ny ahafantarana azy – ary 11 taona i Luciana Dias.
Tamin'io andro io, teo afovoan'ny vahoaka miisa 30000, dia tao anaty fiara niaraka tamin'ny Arsevekan'i São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, ry zareo, teny an-dalana ho any Sé Cathedral. Tao no nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny lanonana fandevenana ny rain'izy ireo, Santo Dias, izay maty iray andro mialoha ny fihetsiketsehan'ny mpiasa.
Nizara bokikely teo am-baravaran'ny orinasan'ny fantsom-pahitalavitra teo aloha Sylvania, any Campo Grande, atsimon'i São Paulo i Santo, raha nisy nitifitra avy eo an-damosina nandritra ny ezaka nataon'ny mpitandro ny filaminana hanafaizana ireo mpiasa mpanao fitokonana.
Ary amin'ny maha-mpitarika sendika azy, dia niasa ho mpitarika vondrom-piarahamonina ihany koa izy niaraka tamin'ny vadiny, Ana Dias, tao amin'ny manodidina an'i Vila Remo izay nonenan-dry zareo, tao amin'ny distrikan'i Jardim Ângela, atsimon'ny renivohitra ihany koa i Santo Dias, ary mpikambana tao amin'ny Workers’ Pastoral.
Samy efa olon-dehibe ankehitriny i Santinho sy Luciana, 53 taona sy 51 taona. Miaraka, olo-malaza indrindra ao amin'ny Komity Santo Dias ireo mpiray tam-po ireo, izay mampiroborobo sy manampy amin'ny fikarakarana hetsika mba hitazonana ny fahatsiarovana ilay mpiasa momba ny metaly.
Ankehitriny, dia i Luciana Dias no mpandrindra ny fampianarana ao amin'ny sekoly iray ao Jardim São Luís, any atsimon'i São Paulo. | Saripika: Henrique Sales Barros / Agência Mural, nahazoana alalana.
Mikarakara lanonana ny komity ho fahatsiarovana an'i Santo isaky ny 30 Oktobra amin'ny 2 ora hariva, eo anoloan'ny toerana iasan'ny orinasa Sylvania, ao amin'ny lalana Quararibéia. Ankehitriny dia efa misy tompony maro miara-mipetraka ao.
Eny amin'ny tokotanin-tseranana ny vahoaka mandoko mena ny teny hoe “teto ilay mpiasa kristiana Santo Dias da Silva no maty novonoin'ny didy jadona miaramila tamin'ny 30 Oktobra 1979.” Avy any izy ireo no mankany amin'ny 500 metatra miala eo ho ao amin'ny tokotanim-pasana Campo Grande,izay nandevenana ny vatan'i Santo.
Tamin'ny fotoana nahafaty an'i Santo Dias, 15 taona no nandalo lasa hatramin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny taona 1964 izay nanala ny filoha João Goulart. Nentin'ny jeneraly João Baptista Figueiredo ny firenena, tamin'ny fotoana nanombohana ny adihevitra momba ny fisokafana ara-politika sy ny famerenana ny demokrasia. Na izany aza, efa tamin'ny taona 1985, enina taona taty aoriana, vao nisy sivily indray hitana ny fiadidiana ny filoham-pirenena.
Ho an'i Luciana Dias, ilaina ny vondrona mba tsy ho very an-javony ny tantaran'ny rainy. “Feo iray nampanginin'ny fitondrana jadona izy, ary manana zavatra marobe holazaina hatrany ny feo nampanginina,” hoy izy.
Tontosaina ao amin'ny efitrano iray ao amin'ny Toeram-Pivoriana Trinite Masina, any amin'ny renivohitra distrikan'i Santo Amaro, ny fivorian'ny komity. Tonga tao amin'io toerana io i Santo Dias rehefa tonga teto an-tanàna toy ny maha mpifindra monina avy any Terra Roxa, tanàna iray ao anatin'ny fanjakana São Paulo, tamin'ny taona 1962.
Izay olona te handray anjara amin'ny fivoriana dia raisina avokoa. “Ao [amin'ireo fivorian'ny Komity] dia misy ny pretra, Eveka, mpianatry ny oniversite, naman'i Santo,” hoy i Santinho.
Navelan-dry zareo ho an'ny Cedem (Foiben-Tsiaro sy Fandraketana) ao amin'ny Unesp (Oniversitem-Panjakana ao São Paulo) ny fikajiana ny antonta-taratasy maherin'ny 3 500, ao anatin'izany ny lahatsoratra, sary ary horonantsary, sy ny hafa, mifandraika amin'ilay mpiasa. Azo jerena ao amin'ny foiben'ny Cedem ao Praça da Sé, ao afovoan-tanànan'i São Paulo ny arsiva.
Mihevitra i Luciana Dias fa fomba tsara indrindra hitahirizana azy ireo ny famelana ireo tahiry ireo ao amin'ny Cedem. “Voatahiry, tsara aro sy tsy miova hafanana ny zava-drehetra ao. Eto [miaraka amin'ny fianakaviana] mijanona ao anaty baoritra izany fitaovana rehetra izany,” hoy izy mampahatsiahy.
Tamin'ity taona ity, matetika mifampizara ny fianakaviana mba hanatrika ireo hetsika maro mitranga, indraindray amin'ny andro iray ary amin'ny fotoana mitovy.
Santinho nahazo diplaoma tamin'ny maritrano ary nanangana ny tranony manokana| Sary: Henrique Sales Barros / Agência Mural. nahazoana alàlana.
“Marobe ireo zava-nitranga izay tsy fantatray fianakavian'i Santo Dias. Misy olona hafa, avy any amin'ny toeran-kafa, tonga aty aminay ary miteny hoe ‘jereo, tongava aty, hanome voninahitra ny rainareo izahay. ‘”hoy i Santo Filho.
Ny sabotsy 26 Oktobra, ohatra, dia nankany amin'ny tanàna São José dos Campos, adiny iray mandeha fiara miainga avy any São Paulo i Santinho mba handray anjara amin'ny hetsika iray nataon'ny Sendikan'ny mpitondra fiara ho fanomezam-boninahitra ny rainy. Mandritra izany fotoana izany, Luciana kosa nankany amin'ny Tsangambatom-Pahatsiarovana ny Fifaharana any afovoan'i São Paulo, izay foibe famonjana tamin'ny didy jadona, mba handraisana anjara amin'ny famoahana ny andiany faharoa amin'ny boky biografika “Santo Dias: “Rehefa lasa ho Tantara ny lasa.”
Nosoratan'i Luciana niaraka tamin'ny mpanao gazety Jô Azevedo sy ilay mpaka sary Nair Benedicto ny boky. Navoaka tamin'ny taona 2004 ny andiany voalohany, ary ahitana fijoroana vavolombelona mihoatra ny 60 avy amin'ny olona mpivavaka, fianakaviana, namana ary mpiasa efa misotro ronono izay akaikin'i Santo ny boky.
Nilaza i Luciana fa lehibe tamin'ny hevitra hanoratra boky momba ny rainy izy: “Tantaran'ireo deba, andriana sy kolonely efa marobe, saingy tsy mba nomena lanjany mihitsy ny tantaran'ilay mpiasa,” hoy izy.
Fahatsiarovana ho an'ny ho avy
Rehefa nanontaniana ny fomba nandraisan'ny tanora avy any amin'ny faritra manodidina anjara tamin'ny famelomana ny fahatsiarovana ny rainy i Luciana dia nahatsiahy ny seho an-tsehatra tamin'ny volana Febroary, seho izay mifototra amin'ny biografian'ny rainy, nokarakarain'ny vondrona tanora avy amin'ny Orinasan-kolontsaina Capão Redondo, ao atsimon'i Sao Paulo.
Nijery ny “Os Santos Dias do Capão“, notontosain'i Ícaro Rodrigues, 34 taona tao amin'ny Cia. Mungunzá ao afovoan'i São Paulo i Luciana. Rehefa nampahafantarina ireo tanora mpilalao izy tamin'ny fiafaran'ny seho, dia nilaza izy fa gaga ry zareo ary nisaotra azy tamin'ny fanatrehana, tao anatin'ny ranomaso sy tsiky. “Tena nampihetsi-po izany,” hoy izy.
Nanonona ireo mpandrindra, mpampianatra sy mpianatra Ubuntu, tambanjotram-pampianarana hidirana ao amin'ny oniversite ao atsimon'i São Paulo ihany koa izy, izay mitondra ny anaran'ny rainy ny iray amin'ireo sampana ao. Niara-niasa tamin'ny komity izy ireo ary namorona afisy miaraka amin'ny Kaody QR izay mampifandray ny pejy misy vaovao momba an'i Santo Dias.
Rehefa nanontaniana, dia natoky tena i Santinho fa ho voatahiry ny fahatsiarovana ny rainy na dia efa maty aza ny anabaviny sy ny olona izay nanana fifandraisana akaiky tamin'i Santo. “Tsy anay, ny fianakaviany intsony ny fahatsiarovana an'i Santo: fa an'izao tontolo izao,” hoy izy.